mooshinka ka dhanka ah Xukuumada oo ilaa galabta soo gaaray iyo Ra’iisul Wasaaraha oo ka baaqdey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
mooshinka ka dhanka ah Xukuumada oo ilaa galabta soo gaaray iyo Ra’iisul Wasaaraha oo ka baaqdey
MAREEG 4 December 2014 4 December 2014
Dooda Xildhibaanada Baarlamaanka ee mooshinka ka dhanka ah Ra’iisal wasaare Cabdweli Sheekh Axmed ayaa galabta soo gaartay, iyadoo dood xiiso leh ay dhex mareyso Xildhibaanada labada dhinac.
Ilaa 86 xildhibaan ayaa is qortay in ay dooda ka qeyb galaan iyadoo illaa iyo 48 xildhibaan la dhagaystay doodahoodii, kuwaasoo aan isku aragti aheyn, waxayna ahaayeen kuwo mooshinka ka soo horjeeda iyo kuwa taageersanaa.
Xildhibaanada baarlamaanka oo markii horeba u qeybsanaa labo dhinac ayaa doodahooda waxa ay ku salaysnaayeen qaar taageeraya ra’iisal wasaaraha iyo waxyaabihii uu qabtay halka qaar kalana ay soo jeedinayeen dhaliilo ku aadan ra’iisal wasaaraha.
Dooda ayaa si wanaagsan u dhacaysay iyadoo aanay jirin wax buuq ah, waxaana guddoonka baarlamaanka ay hore u sheegeen in la shaqeynayo labada gelin ee maalmaha Khamiista iyo Sabtida.
Guddoonka ayaa rajo ka qaba in uu soo dhameeyo dooda maanta si loo gudo galo cod u qaadista mooshinka 6-da bisha December oo ku aadan Sabtida.
Xildhibaanada ayaa waxa ay yihiin qaar diyaar u ah dooda inay ka qeybgalaan halka kuwa kalana ay dhagaysaneen doodaha.
XIlliyada salaada iyo cuntada oo kaliya ayaa baarlamaanka uu yahay mid loo kacayay balse inta kale ay yihiin qaar aan loo kala kicin.
Waxaa suura gal ah in dooda xildhibaanada ay u dhacdo ilaa maalinta sabtida, maadaama waqtiga uu xilli gelin dambe ku sii dhow yahay, isla markaana Baarlamaanka aan ilaa saaka u kala kicin fadhigiisa.
Madaxweynaha maamulka Puntland oo xariga ka jaray dhismaha garoonka Boosaaso